galmudugnews.com » Cabdi Qaybdiid miyaa la neceb yahay mise Reer Hilowle?
Home » WARARKA » Cabdi Qaybdiid miyaa la neceb yahay mise Reer Hilowle? Cabdi Qaybdiid miyaa la neceb yahay mise Reer Hilowle? galmudug on
No Comment Views 165271Galmudugnews.com – Hogaamiye kooxeedka Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa reerka uu ka dhashay ku beer laxawsanaya in Madaxweynenimada Galmudug loogu diidan yahay jufada uu ka dhashay ee Reer Hilowle halka dadka qaarna ku doodayaan in beesha Sacad neceb yihiin Cabdi Qaybdiid laakiin hadaladaan oo dhan waa kuwa xaqiiqada ka fog.
Beesha Reer Hilowle sow maaha Ciiltirayaasha beesha Sacad?
Ma jirto Colaad u dhaxeysa bulshada ku abtirsata beesha Sacad Habargidir ,waxaana ka marqaatiya in wiilashii uu isku dilay Cabdi Qaybdiid ee Villa Somalia iyo Seybiyaano hal talis iyo hal taliye maanta leeyihiin.
Beesha Reer Hilowle waa hormuudka beesha Sacad hasse yeeshee Garaad xume ku abtirsada waa gedii lagu yaqiin.
Beesha Sacad Cabdi Qaybdiid miyeey neceb tahay mise isaga Sacad neceb?
Cabdi Qaybdiid oo lagu xasuusto inuu yahay ninkii iska horgeeyay beesha Sacad ee Colaada lagu hoobtay ka dhex riday wali beesha uu ka dhashay ma necbo laakiin isaga neceb beesha Sacad horumarkooda,sababtana waxaan u hayaa cadeeyn buuxda.
Cabdi Qaybdiid markii lagu xiray Sweden guud ahaan beesha Sacad Habargidir dal iyo dibad ma harsan mana hoyan ee waxay ku jireen halgan ay ku dalbanayaan in la sii daayo hogaamiyahooda.
Guud dhalinyarada beesha Sacad kuwii uu aabahood dilay iyo kuwii uu colaada u adeegsaday waxay safka hore ka galeen dagaalkii Cabdi Qaybdiid kula jiray Xoogagii Maxaakiimta.
Ciidamadii beesha Sacad oo dhan waxay aqbaleen inay hoos tagaan oo isaga ayey ka wada amar qaadan jireen xilligii uu ahaa Wasiirka TFG ama Taliyaha Boliiska.
Sedexdaan dhacdo waxay ka marqaati kaceeysaa in beesha Sacad necbeyn Cabdi Qaybdiid balse isaga ayaa neceb beeshiisa taasna waxaan idiin hayaa cadeeyn buuxda .
Cabdi Qaybdiid wuxuu ahaa ninkii burburiyay Dowladii Salbalaar ee Jeneral Mohamed Farah Caydiid xilli halgankii lagu jiray mudada dheer mira dhalay.
Cabdi Qaybdiid wuxuu ahaa ninkii hogaaminayay ee abaabulay dagaalkii beesha Sacad u dhaxeeyay.
18 sano kadib Cabdi Qaybdiid wuxuu dib boorka uga jafay qorshahiisii burburinta horumarka beesha Sacad,.
Maamulka Galmudug lixdii sano ee la soo dhaafay wuxuu ku tilaabsaday guul siyaasadeed hasse yeeshee maalintii uu aqoonsiga helay ayuu Cabdi Qaybdiid ku dhawaaqay inuu yahay Madaxweynaha Galmudug.
Cabdi Qaybdiid maaha DHISE laakiin waa BURBURIYE?
Oraahdaan waxaa ka marqaati kacaya in Qaybdiid gulufkiisu yahay sidii uu beesha Sacad mar labaad indhaha uga ridi lahaa !!
Mohamed Farah Jimcale iyo Ahmed Ducale Geelle Xaaf ayey beesha Caalamka diiday inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee Somalia sidaas darteed makula tahay caqli gal in Caalamka aqbalayo Cabdi Qaybdiid oo sheeganaya Madaxweynenimada Galmudug? Jawaabta waa mid cad.
Beesha Reer Hilowle waxay jaanis u heystaan inay Masuul hogaamin kara Galmudug la yimaadaan laakiin Madaxweynenimada Cabdi Qaybdiid Masjidka Cabdalle iyo Cawareere lagama dhihin Marxaba,taqabal,kuwa u duceeyayna ducadooda samada lagama dhihin Aamiin, Bulshada Sacadna kuma farxin.
Burburiye Cabdi Qaybdiid waxa laga fishaa waa inuu ku geeriyoodo colaada uu abaabulkeeda ku jiro maadama uu ka baxay balantii uu qaaday ee ahayd inuu Dagaal Sokeeye oo dambe ku lug yeelan doonin.
Dowladnimada maaha Galkacyo ka tag ee Ceelguula tag,adigoon Gelinsoor cag dhigi Karin.
Dowladnimada maaha ,Guri Galkacyo ku yaal uga dhawaaq Wasiiro ,adigoo Wasiirka Kaluumeysiga Kheyraadka badda iyo Dekadaha u magacaabaya Taksiile ku wareeray London oo magacyo badan loogu bixiyay fudeedkiisa,aqoondaradiisa iyo dadnimo xumadiisa.
Cabdi Qaybdiidoow maanta maaha shalay,shalayna maaha maanta,waxaan kugula talin laheyn inaad noqotid dhise u tanasula bulshadiisa halka aad ka tahay Burburiye mar walba astaan u noqday burburinta dadkiisa.
Cismaan Caato,Xuseen Caydiid,Cabdi Shukri,Mohamed Farax Jimcaale,Axmed Xaaf inteey garteen garo ,oo damacaada waalan dawadiisa cab.
Taladeyda ugu dambeysa waxay tahay inaad Gogol nabadeed dhigtid,bulshada Sacad ku casuuntid,kana dalbatid Cafis iyo in la is saamaxo ,taasina waa jaaniska kaliya ee maanta aad ku sii noolaan kartid .
Hadii aad taladaan diidid gacan Cadaw ayaad geli doontaa maadama aan ogahay ragga habeen iyo maalin dacwada kula dabajooga iyo xiriirkooda Caalamka.
Wiil aad adeer u tahay ayaad sababsan doontaa gacantiisa,oo xabad uu riday ayaa xabaasha kugu sagootin doonto ama Sida qorshahaaga u fashilmay intaad ka naxdo ayuu wadnaha ku istaagi doonaa.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21021 hitsContact US - 19683 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15802 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15525 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13970 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13927 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13832 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13784 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11843 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11809 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11757 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11539 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11510 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11367 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11278 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11099 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11066 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10895 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10558 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10386 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10366 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10081 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10036 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9795 hits Home About